Izindaba - I-Diatomaceous Earth Yezibulala-zinambuzane
I-Diatomaceous Earth Yokubulala Izinambuzane
Wake wezwa ngomhlaba we-diatomaceous, owaziwa nangokuthi i-DE? Uma kungenjalo, lungiselela ukumangala! Ukusetshenziswa komhlaba we-diatomaceous engadini kuhle. I-diatomaceous Earth ingumkhiqizo omangalisa ngempela ongakusiza ukhule ingadi enhle nenempilo.
Uyini umhlaba we-Diatomaceous?
Umhlaba we-diatomaceous wenziwe ngezitshalo zamanzi ezimbiwa futhi uyinhlanganisela yamaminerali e-siliceous sedimentary ngokwemvelo kusuka ezinsaleleni zezitshalo ezinjenge-algae ezibizwa nge-diatoms. Izitshalo bezilokhu ziyingxenye yohlelo loMhlaba lwezemvelo olusukela ezikhathini zangaphambi komlando. Ama-chalky afaka ama-diatom asele abizwa nge-diatomite. Ama-diatom ayambiwa futhi agaywe phansi enze i-powder ebukeka futhi izwakale njenge-talcum powder.
Umhlaba we-Diatomaceous umuthi wokubulala izinambuzane osuselwa kwizimbiwa futhi ukwakheka kwawo cishe kungamaphesenti ama-3 we-magnesium, amaphesenti ama-5 sodium, amaphesenti ama-2 insimbi, amaphesenti ayi-19 e-calcium namaphesenti angama-33 e-silicon, kanye namanye amaminerali amaningi wokulandela umkhondo.
Lapho usebenzisa umhlaba okwehlukanisayo engadini, kubaluleke kakhulu ukuthenga kuphela umhlaba we-"Diatomaceous diatomaceous" futhi HHAYI umhlaba we-diatomaceous osusetshenziselwe izihlungi zamachibi okubhukuda iminyaka. Umhlaba we-diatomaceous osetshenziselwa izihlungi zamachibi okubhukuda uhamba ngenqubo ehlukile eguqula ukwakheka kwayo ukufaka okuqukethwe okuphezulu kwe-silica yamahhala. Noma usebenzisa i-food grade diatomaceous earth, kubaluleke kakhulu ukuthi ugqoke isifihla-ntuli ukuze ungaphefumuli kakhulu uthuli lomhlaba olune-diatomaceous, njengoba uthuli lungacasula ulwelwesi lwamafinyila emakhaleni nasemlonyeni wakho. Lapho nje uthuli seluzinzile, noma kunjalo, ngeke kube yinkinga kuwe noma ezifuyweni zakho.
Usetshenziselwani Umhlaba We-Diatomaceous Engadini?
Ukusetshenziswa komhlaba we-diatomaceous kuningi kepha engadini umhlaba we-diatomaceous ungasetshenziswa njengesibulali zinambuzane. Umhlaba we-diatomaceous usebenza ukuqeda izinambuzane ezinjenge:
Izikhukhula Zabantu Abadala
Amaphela Iminenke Slugs
Kulezi zinambuzane, umhlaba onamadiyasi uluthuli olubulalayo olunemiphetho emincane ebukhali esika isembozo salo esivikelayo bese iyazomisa.
Enye yezinzuzo zomhlaba we-diatomaceous wokulawulwa kwezinambuzane ukuthi izinambuzane azinayo indlela yokwakha ukumelana nawo, okungenakushiwo ngemithi yokubulala izinambuzane eminingi.
Umhlaba we-diatomaceous ngeke ulimaze izikelemu noma yiziphi izinto ezincane eziwusizo ezisenhlabathini.
Ungawusebenzisa Kanjani Umhlaba We-Diatomaceous
Izindawo eziningi lapho ungathenga khona umhlaba we-diatomaceous zizoba nezikhombisi-ndlela eziphelele ngokusetshenziswa okufanele komkhiqizo. Njenganoma imuphi umuthi wokubulala izinambuzane, qiniseka ukuthi ufunda ilebula ngokuphelele bese ulandela izinkomba ezikulo! Izinkomba zizobandakanya ukuthi uwusebenzisa kanjani kahle umhlaba we-diatomaceous (DE) engadini naphakathi endlini ukulawula izinambuzane eziningi kanye nokwakha umgoqo wezinhlobo ezilwa nazo.
Ensimini umhlaba ongasetshenziswa kahle ungasetshenziswa njengothuli ngesicelo sothuli esivunyelwe ukusetshenziswa okunjalo; futhi, kubaluleke kakhulu ukugqoka imaski yothuli ngesikhathi sokufaka umhlaba we-diatomaceous ngale ndlela bese ushiya imaski iqhubeke uze ushiye indawo yothuli. Gcina izilwane ezifuywayo nezingane kude nendawo yothuli kuze kube yilapho uthuli seluhleli. Lapho usebenzisa njengohlelo lothuli, uzofuna ukumboza kokubili phezulu nangaphansi kwawo wonke amahlamvu ngothuli. Uma lina nje ngemuva kokufaka isicelo sothuli, kuzodingeka ukuthi lisetshenziswe kabusha. Isikhathi esihle sokwenza isicelo sothuli singemva kwemvula encane noma ekuseni ngovivi lapho amazolo ephezu kwamahlamvu njengoba esiza uthuli ukunamathela kahle emahlamvu.
Lokhu kungumkhiqizo omangalisayo wemvelo ongasetshenziswa ezingadini zethu nasemakhaya ethu. Ungakhohlwa ukuthi yi "Grade Wokudla" komhlaba ongcolile esikufunayo ezingadini zethu nasekusetshenzisweni kwasekhaya.
Isikhathi Iposi: Jan-02-2021